Madaxweyne Hambalyo: Waa Wasiirro Hal-abuur yeelan kara! | Somaliland.Org
July 30, 2010	Qalinkii Maxamed Baashe X Xasan
Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) waxa uu magacaabay wasiirro tayo leh. Waxa muuqata inuu madaxweynuhu aqoon uga xishay wax kasta oo kaleba: Annagaa badnaan jirney “laandheere ahayn” oo jagooyin lama taabtaan ah lahaan jirney waxa hafiyey aqoon iyo diyaar ahaansho. Waa halkii Cali Sugulle “Duncarbeede” ka lahaa “Kuftay dhacday turunturrootay ayaad taqaane; maxaad taqaan, toobiye weeye lagu tisqaade maxaad taqaan”! Toban ka mid ah 20-ka wasiir ee cusubi waxa ay hagoogan yihiin derejooyinka aqooneed ee ugu sarreeya: Eng, Dr iyo Prof. Tobanka kalena waa wada heer jaamacadeed oo sare intooda ugu badani. Badiba wasiirradu waa dad ku cusub saaxadda iyo fagaaraha siyaasadeed. Waxa ka dhex muuqda rag iyo haween aqoontooda ku darsaday karti, hufnaan, anshax iyo hal-abuurnimo. Waxa lagu tilmaami karaa in golahani noqonayo kii ugu tayada fiicnaa weligii ee Somaliland yeelato illaa hadda. Waana markii ugu horraysey golaha wasiirradeenna ay haweenku door wacan ku yeeshaan. Inta badan maaha wasiirrada cusubi “ raggii beelaha iyo madax dhaqameedyadu kalsoonida u hayeen ee qoolasha reeraha ku jiri jirey, raggii awr-ku-kacsiga qabyaaladdu u ahaa sallaanka”! Taas ka horjeedkeeda, waxa golahan cusub ka buuxa rag iyo hablo isku kalsoon oo aan maanka iyo maskaxdooda lala lahayn oo si xor ah u fekeri kara, u hawl geli kara, una fulin kara waajib gudashooyinkooda horyaalla.
Waxa gebi ahaanba golahan ka maqan intii wax laga saari jirey wixii qallooc iyo qardoofooyin ummaddan iyo dalkeeda ka soo ilmo-rogtey dhawrkii tobanle ee taariikhdeennan ugubka ah. Rag badan oo wasiirradan ka mid ahi waa qurba-joog. Horeba qurba-jooggu wasiirro way noqon jireene, waxa maanta cusub, in qurba-jooggani ka mid yihiin intii nolosha qurbaha la jaanqaadday. Kab ninkii aad ka tolanaysa kabtiisaa la eegaa! Hore waxa qurba-joogga uga soo bixi jirey oo xilalka loo dhiibi jirey inta badan in toodiiba u taag la’ayd oo gurbuhu soo tufay. Badiba raggan iyo hablahan gurbaha ka tegey ee xilalka culus loo dhiibay waxa ay ka mid yihiin intii qurbaha ku tirsanayd ee tooda kafaysey, ta guud u heellaynaan jirtey.
Waddamadii Bariga Yurub ee shuuciyaddu ka dhacday tobanlihii u dambeeyey qarnigii hore, sida Czech Republic iyo Polland, waxa dhulka ka soo qaaday oo Yurubta Galbeed ku soo dhoweeyey horumar ahaan qurbajooggoodii dibedda oo aqoon iyo dhaqaaleba kula laabtay. Waxa aan xasuustaa Vaclav Havel iyo Vaclav Klouse sidii ay Czech Republic u dhaqaajiyeen sannadihii 1990-aadkii markii Xisbigii Shuucigu dhacay ee labadaasi Vaclav iyo raggii kale ee la socdey ee Yurubta Galbeed iyo America ka soo gurya noqday ee ay toobiyaha cad dalkooda ugu jeexeen. Maanta Czech Republic waxa ay horraysaa waddamo badan oo ay ka dambayn jirtey.
Labaatankeenna wasiir ee aynu aqoontooda, kartidooda iyo hufnaanta maanta majeersannahay inteenna badani, waxa aynu ka eegaynaa sida kuwaas dhiggooda ahi uga soo dhalaaleen waajib gudashooyinkoodii ee ay dalalka iyo dadyowgooda ugu horseedeen jidadkaas libtooyada iyo horumarku ka widhwidhayo. Wasiirrada cusub iyo hoggaankooda, waxa laga quuddarraynayaa in ay qaadaan jidkaas Maleeshiya, Singapour, Czech Republic, Rwanda iyo dunida aan gadaal eegga ahayn ee hor u jeedka ah.
Previous PostNew Government, New DawnNext PostMadaxweynaha cusub oo ka hadlay xaaladda amni (DAAWO munaasibaddii xil-wareejinta)	Blog